Alex Barea vaovao
Alexandre Ramalingom no anarany. Izy no ho anisan’ny mpilalao baolina kitra nanaiky hanatevin-daharana ny Barea. Teraka tao Frantsa ny 17 martsa 1993 izy.
Manana fiaviana Malagasy izy na dia teraka tao Frantsa aza. Mpanafika ny anjara toerany. Tao amin’ny diviziona voalohany tao Frantsa no nanombohany ny maha-mpilalao baolina kitra matihanina azy ary efa nahatratra 30 mahery ny baolina matiny tamin’izy nilalao tao Frantsa. Ao amin’ny Royal Excelsior Virton ao Belzika no misy azy amin’izao fotoana. Efa manomboka miteraka resabe any anaty tambajotram-pifandraisana ity tovolahy ity. Tsy ny fahakingany eo ambony kianja ihany no nanaitra ny olona taminy fa ny hatsaran-tarehiny sy ny bika hananany koa. Misy sahady aza ireo nilaza fa mety haharesy ny lazan-dry Melvin, izay mpiandry tsato-kazon’ny Barea sy ny an’i Dimitry Caloin ny lazany. Ankoatra azy moa dia anisan’ny hanatevin-daharana ity ekipan’ny Barea ity koa i Hakim Djamel Abdallah, mpanafika sady lohalaharana vao 22 taona, izay milalao ao amin’ny FC Nantes nanomboka ny volana jolay 2018 ka hatramin’izao, ny iray amin’izany. Anisan’izany koa i Bastien Hery izay 28 taona. Irakiraka ny anjara toerany ary milalao ao amin’ny Linfield Ao Irlande Avaratra nanomboka ny volana jolay 2019 izy. Izy telo mirahalahy ireo izany no nanaiky hanatevin-daharana ny Barea de Madagascar ka ho isan’ny mpilalao hifanandrina amin’ny Côte d’Ivoire amin’ny volana martsa. Ankoatra izay moa dia fantatra fa efa miverina miakatra an-kianja koa i Zotsara raha voatery niato noho ny ratra nahazo azy. Mety hananosarotra kosa ny hilalaovan’i Jeremy Morel amin’io lalao amin’ny martsa io satria maratra koa izy.